SALON DE LA CREATIVITE VOATRA
Trano heva miisa 110 no nandray anjara
Natao teto Toamasina ny andihany faha 2 ny Salon de la creativite voatra izay nandraisan’ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary faritra Analamanga, teo nanoloana ny lapan’ny tanana Toamasina, ny alakamisy 21 aogositra. Ny fandaharan’asa PROSPERE no tompon’antoka tamin’ny fikarakarana izy ity. Araka ny fantatra dia nandrintra ny 3 andro ny hetsika izay hanaovan’ireo mpanao ny asa tanana. Isany antony nanaovana izao hetsika izao mba hanetsiketsehana ny mpanao asa tanana aty amin’ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo.
Fantatra ihany koa fa nanomboka tamin’ity taona ity vao tonga taty amin’ny faritra ny tetik’asa .Ny vokatra andrasana kosa dia ny mba hampiroborobo ny asa tanana aty amin’ny faritra sy hanatsara ny fidiram-bola miditra amin’izy ireo, io no nambaran’i Atoa william RANDRIAMAMPIANINA, mpandrindra iraisam-paritra ny fandaharan’asa PROSPERE.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana izay natao fa mahatratra 2 000 000 ny isan’ny mpanao asa tanana eto madagasikara ary mampiditra 13 % ao amin’ny harikarena eto amintsika.
Prud′Homme RAKOTOSON : 20-08-2014 - 18:30